एकपटक देवराज इन्द्र महत्वपूर्ण काम लिएर यमराजलाई भेट्न जाँदै थिए । बाटोमा नदि थियो । यमराज नदि पारि थिए भने इन्द्र वारि ।
जब उनी पारी जाने सोच्दै थिए तब नदिमा एउटा कमलको फुल उल्टो धारामा बगेको देखे । उनी ‘के रहेछ यस्तो ! यत्ती हेर्छु र पारी जान्छु’ भनेर कमलको फुलको पछि जान्छन् । एकैछिन भनेर हिँड्दा हिँड्दै उनी हिमालयसम्म पुगेछन् । हिमालयमा पुग्दा त्यो भन्दा झन अर्को आश्चर्यजनक कुरा देखेछन–त्यो एकलास ठाँउमा एउटी अत्यन्त सुन्दरी आँसुका ढिक्का बगाउँदै रुँदै थिइन् ।
अब उनको ध्यान कमलबाट हटेर सुन्दरीमा पर्यो । उनले ती रुपवतीलाई भक्कानो छुटाएर रुनुको कारण सोध्छन् । तरुनीले इन्द्रलाई पछि–पछि लाग्ने इशारा गर्छिन् । इन्द्र सबथोक बिर्सेर तरुनीको पछि–पछि लाग्छन् र, हिमालको टुप्पोमा पुग्छन् । त्यहाँ झनै अचम्म पार्ने कुरा देख्छन् –एक नव युवकयुवती अंगालोमा कसिएर प्रेमालापमा चुर्लुम्म डुबिरहेको ।
इन्द्र उनिहरुको अघि जान्छन, त्यै पनि त्यो जोडिले कुनै भेउ नपाएको जस्तो गरेपछी इन्द्रलाई सारै रिस उठ्छ । रिसको झोकमा उनी गर्जन्छन्–‘सावधान ! म देवताहरुको राजा इन्द्र हुँ ।’ जब त्यस जोडिले इन्द्र तर्फ नजर गरे उनको सातो–पुत्लो उड्यो । त्यो जोडि अरु कोहि नभएर शिव–पार्वती थिए । त्यसपछी शिवजीले बाधा उत्पन्न गरेको भनी इन्द्रलाई श्राप दिन्छन्, । र यहि श्रापको कारण देवयोनीबाट पतन भइ इन्द्र मनुष्य योनिमा जन्म लिन बाध्य भए ।
माथिको सानो कथाको सार हामी कुनै उद्देश्य लिएर अगाडी बढेका छौं भने, त्यो उद्देश्यबाट विमुख भएर अन्यत्र ध्यान दिए पतनको बाटोमा जान्छौं भन्न खोजिएको हो ।
देवराज इन्द्रको उद्देश्य थियो यमराजलाई भेट्ने । देवराज खोलाको वारी हुँदा यमराज उहीँ खोलाको पारी थिए । इन्द्रले कमलको फुलतर्फ ध्यान नदिइ खोला तरेको भए यमराजलाई भेट्थे, लक्ष्य विमुख हुने थिएनन् । तर, उनी त पूर्व जानुपर्ने पश्चिम दौडिए ।
हो, अहिलेका नयाँ पुस्ताहरु पनि देवराज इन्द्रकै पथमा लम्किरहेका छन्
१८ देखि २३ वर्ष भनेको किशोर उमेरले छोडेको युवा जोश जाँगरले भरिएको उमेर हो । माध्यामिक तह पार गरेर कलेज तहमा प्रवेश गरेकादेखि ब्याचलर, मास्टर्स गर्दै गरेका युवाहरुमा आइपरे एकै मुक्कामा राँगो ढालि हालौं जस्तो साहस हुन्छ, हत्केलाले सुर्यलाई रोक्छु भन्ने जोश हुन्छ । ढुङ्गै खाएपनि पचाइन्छ भन्ने जस्तो हुन्छ ।
केहि गरिहालौं, कतै गइहालौं, आज नगरे कहिले गर्ने जस्तो छटपटाहटबाट गुज्रिरहेका युवालाई सहि दिशानिर्देश गर्न सकिएन भने त्यसले ठूलो दुर्घटना निम्त्याउन सक्छ । उनीहरु ब्रेक फेल भएको गाडी जस्तो अन्धाधुन्ध दौडन्छन् र अन्ततः भयानक दुर्घटनामा पर्छन् ।